ROVAN’AMBOHIMALAZABE | Madatopinfo
Nisy ninia nandoro, lavenona sisa
Very hasina ny mahamalagasy, simba ny vakoka ara-tantara. Ny 26 Aogositra 2015 no may ny rova an’Ambohidratrimo izay tsy misy tohiny hatreto ny fikarohana ireo nahavanona ny loza. Ny alin’ny 10 Janoary lasa teo indray, tokony ho tamin’ny fito ora sy sasany no nitrangana fahamaizana ny rovan’Ambohimalazabe. Nisy ny faritra nahita ny firehetana fa nisy faritra takona, tsy nahita izany. Efa niredareda ny afo vao taitra avokoa ny rehetra. Ara-tantara hoy Vanf Nasolo-Valiavo Andriamihaja , Andriantompokoindrindra, izay nafenina tao Ambohimalazabe, dia zanaky ny mpanjaka Ralambo. Ny fankalazana ny faha 450 taona nahaterahany, tamin’ny faran’ny volana Aogositra 2006, dia nampatsiahivana ny fifanaraham-panjakana nataon’izy zokiny sy Andrianjaka zandriny, izay narahina hatramin’ny faran’ny «Tany Gasy». Raha tsy hilaza afa-tsy ny hoe ny vadim-panjakana dia alaina amin’ny taranak’Andriantompokoindrindra. Andriantompokoindrindra no nitondra ny tranomanara teto Ankibon’Imerina, ka nahatonga ny anarana hoe «Terak’Ifohiloha» nentina niantsoana ny Zanakandriana, Zazamarolahy, Andriamasinavalona ary ny Andriantompokoindrindra. Iny fankalazana tamin’ny 2006 iny ihany koa no nanatsidihina ny maha-Andriantompokoindrindra ray, Andriantompokoindrindra reny, ny mpanjaka Andriamasinavalona izay zafiafin’Andriantompokoindrindra.
Mifono hevitra politika
Tamin’iny taon-dasa iny, maro no nitady hikitikitika ny faritra Ambohimalaza sy ny manodidina raha tsy hilaza afa-tsy ny fahavakisan’ny fasana nifanesisesy tamin’izany. Razana maromaro no tsy hita tamin’izany, ary tsy mbola nisy tratra hatreto na dia teo aza ny antso avo nataon’ny Zanakandriana. Tamin’ity tranga fandoroana ny rova ity indray, tsy fantatry ny mponina ny niavian’ny afo tao amin’ity rovan’Ambohimalazabe ity. Araka ny fomba fijerin’Andriamatoa Nirina Razafindrainibe, zanak’Ambohimalaza: “tsy nodorana t@ solika aloha ny rovan’Ambohimalazabe, tsy toy ny teny amin’ny rovan’Ambohidratrimo izay nodorana t@solika. Ny fijeriko dia niditra an-keriny tao anatiny trano manara ilay olona .Misy tsihy sy lamba fanatitra maro manko mameno ny rindrina. Nampirehatra labozia ilay olona dia norarahany zavatra mora mirehatra teo amin’ny tsihy, dia lasa izy”. Ambohimalazabe, telo kilômetatra eo atsimon’Ambohimalaza no misy azy, voahodidina ala fa tsy misy tanàna, ka anisan’ny nanamora ny asa ratsy nataon’ireo olon-tsy fantatra izany.
“Politika avolenta io .Potehina ny hasina mahamalagasy, tsy ny Andriana ihany, fa ny malagasy rehetra, Andriantompokoindrindra koa no lahimatoan’ny merina. Misy olona maniraka manao izao fanapotehina izao. Nodorana ny rova Manjakamiadana, ny rovan’Ambohidratrimo, ny teny Antsahadita, … dia io ny eto Ambohimalazabe io”, hoy hatrany ny fanampim-panazavana. Ny Fiombonamben’ny Ampanjaka sy ny Zanakandriana eto Madagasikakara, tarihin’i Printsy Dokotera Ndriana Rabarioelina moa dia nanameloka tanteraka iny fandoroana ny rovan’Ambohimalazabe tamin’ny alin’ny Talata lasa teo iny. Nisy fiantsoana ny terak’Andriatompokoindrindra natao ny Sabotsy 14 Janoary 2017 tolakandro lasa teo, tao amin’ny Kaominina Ambohimalaza Miray, fivoriana nandinihina ny fanarenana ny rova may. Fa mbola mijanona ho mistery ihany ankehitriny ity resaka fandoroana rova etsy sy eroa izay mateti-pitranga tato ho ato izay.